တောင်သမန်သားလေး: March 2016
ဗီဒီယိုတွေကိုအသံဖြောက်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းနဲ့ လန်းနိုင်မယ့် Easy Mix Audio Video7 Apk
ဖုန်းနဲ့ ရိုတ်ထားတဲ့ Video တွေကို အသံဖြောက်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mp3 သီချင်းတွဲလို့ ရပါပြီ။
ယခု App ၏ "ADD VIDEO" နေရာတွင် Video File ကိုထည့်ပြီး "ADD AUDIO" နေရာမှာတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းကိုထည့်ပေးရမှာပါ..ပြီးရင်တော့ "Mix Audio and Video" ကိုနှိပ်ပြီး သီချးနဲ့ တွဲထားတဲ့ Video File ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
File Size မှာ 7.6MB မျှသာရှိပြီး Android OS Version 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုတွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းနဲ့ လန်းချင်သူတွေတွက် Easy Mix Audio Video Apk လေးကိုအောက်မှာရယူလိုက်ပါ။
ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Messenger v65.0.0.9.5 Apk
ပုံစံတွေကတောအသုံးပြုရတာပိုမိုမြန်ဆန်လာပြီး Messenger Apk တွင် Videos Call နှင့် မက်ဆေ့များ ချစ်စရာစတစ်ကားလေးများနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများအထူးကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ ရမှာပါ။
Update On, 30 Mar 2016
Update Version, Messenger v65.0.0.9.5
File Size, 32.2 MB
Posted by lin linn at 3:12 AM
ဗားရှင်းအသစ်တွင် ပိုမိုပြီး News feed မြန်ဆန်လာတာကို တွေ့ ရမှာဖြစ်ပြီး Facebook ကိုအသုံးပြုရတာအလွန်းကောင်းမွန်လာတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာပြီး ဒီဇိုင်းများလည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်။
Google Play Store တွင်တရားဝင်ထွက်ရှိလာတဲ့ဗားရှင်းဖြစ်လို့ သင့်ဖုန်းဖြင့်ကိုက်ညီမည်ဟုယုံကြည့်ပါသည်။
Version အသစ်တွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အောက်တွင်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။
Update Version, Facebook v70.0.0.22.83
File Size, 35.5 MB
Posted by lin linn at 3:11 AM
အင်တာနတ်ရှိသူအချင်းချင်း မက်ဆေ့ နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ WhatsApp ရဲ့ ဗားရှင်းအသစ်ကို WhatsApp အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Update On, 29 Mar 2015
Update Version, WhatsApp v2.12.561
File Size, 27.7MB
Posted by lin linn at 3:08 AM
Samsung Galaxy A7 All Models ဗားရှင်း Android 5.0.2 Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy A7 All Models ဗားရှင်း Android 5.0.2 Root လုပ်နည်းကို
စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ တစ်လုံးချင်စီအတွက် တင်ပေးနေရင် လိုက်ဖတ်
နေရတာ အချိန်ကုန်တာပေါ့ တစ်နေရာတည်း တစ်စုတည်း တင်ပေးလိုက်တော့
မိမိဖုန်းအတွက် လိုအပ်မယ့် Root ဖိုင်ကို ရယူပြီး အလွယ်တကူ Root လုပ်ရုံပဲပေါ့။
ဒီဖုန်းရဲ့ All Models များကို Root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ CF-Auto-Root ဖိုင်ဖြင့်
Odin ကိုအသုံးပြုပြီး One Click ဖြင့် Root access ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
ဖေါ်ပြပါ Root လုပ်နည်းသည် Samsung Galaxy A7 All Models ဖုန်းများအတွက်
သီးသန့်ဖြစ်ပြီးဖုန်း Android 5.0.2 ကိုသာ Root လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မိမိဖုန်းရဲ့ Model number ကို Check ပြလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Menu > Settings > About Device > ကိုနှိပ်လိုက်ရင် တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖေါ်ပြပါ Root လုပ်နည်းသည် ဖုန်းရဲ့ warranty ကိုထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်တာပါတယ်။
တကယ်လို့ မိမိဖုန်းရဲ့ Stock Rom ကိုပြန်တင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့
ဖုန်းရဲ့ warranty ကပြန်လည် အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာ OEM & USB Debugging Mode ကို Enable ပြုလုပ်ထားရမှာပါ အဲဒီအတွက်
Menu > Settings > About Device ဆိုပြီးတစ်ချက်ချင်း နှိပ်သွားလိုက်ပါပြီး
Build Number ကို ခုနှစ်ချက်လောက် ထောက်လိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့
Developer Option မှ OEM & USB Debugging Mode ကို Enable ပြုလုပ်ပါ။
Click Here to Download Odin
CF-Auto-Root for Samsung Galaxy A7 All Models
CF-Auto-Root Files for Samsung Galaxy A7 SM-A700H
CF-Auto-Root Files for Samsung Galaxy A7 SM-A700FD
CF-Auto-Root Files for Samsung Galaxy A7 SM-A700L
CF-Auto-Root Files for Samsung Galaxy A7 SM-A700K
CF-Auto-Root Files for Samsung Galaxy A7 SM-A700S
CF-Auto-Root Files for Samsung Galaxy A7 SM-A700F
CF-Auto Root ဖိုင်ဖြင့် Root လုပ်နည်း
ဖုန်းမှာ OEM & USB Debugging mode ကို Enable ပြုလုပ်ပါ။
Posted by lin linn at 3:06 AM
Posted by lin linn at 2:55 AM
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ Android မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေပေးနိုင်ဖို့Android Device Manager ဆိုတဲ့ဆေ့ာဝဲလ်လေးကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ထို App တွင် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဖုန်းမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Gmail နှင့် Password ကို ထည့်သွင်းပြီး ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းအား Device Number နှင့်တကွ မြေပုံဖြင့် ဖုန်းရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားသည့်ဖုန်းအား တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားတဲ့ အချက်ပေးသံများပေးပို့ နိုင်ရန် ထို App အတွင်းရှိ Ring နေရာအားနှိပ်ပြီး ပို့ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပျောက်ဆုံးသွားသည့်ဖုန်းအား အခြားသူတွေ ဆက်လက်အသုံးမပြုနိုင်ရန် ဖုန်းကို Lock ခတ်ပစ်ဖို့ App အတွင်းရှိ Lock နေရာတွင် Password Code ကို နှစ်ချိန်ရိုတ်ထည့်ပြီး Lock ခတ်လိုက်လို့ ရပါတယ်။
ဖုန်းထဲက Data တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ရန် ထို App အတွင်းရှိ Erase နေရာအားနှိပ်ပြီးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။
Email တစ်ခုထဲကို ဖုန်းသုံးလေးလုံးး အသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်တော့ ယင် Email နှင့် Password ကို ယခုဆေ့ာဝဲလ်တွင် Login ၀င်ပြီး ဖုန်းတွေကိုထိန်းချူပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပျောက်ဆုံးသွားသည့်ဖုန်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သော Gmail နှင့် Password ကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ ရှာဖွေနည်းကို အပေါ်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်း ရှာဖွေလျှင် အရမ်းလွယ်ကူလှပါတယ်။
သဘောပေါက်သွားအောင် ScreenShot ပုံလေးများပြထားပါတယ်။
Posted by lin linn at 4:45 AM
ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Lock Screen ကိုမှားပြီးလာဖွင့်တဲ့သူရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုရိုတ်ပြီးဖမ်းပေးမယ့် Hidden Eye v1.5 Apk
ဒီနည်းလမ်းဟာ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ Screen Lock ခတ်ထားတယ်ဆိုရင် တခြားသူတွေက lock မသိပဲ ကိုယ့်ဖုန်းကိုမှားဖွင့်မိရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးထားမှာပါ။ သုံးခါပြည့်ရင် Alarm အော်ပီး သတိပေးမှာပါ။
အသုံးပြုနည်းက ကိုယ့်ဖုန်းကို Screen Lock ခတ်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်.. ပြီးပါက ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးထဲက Security Status ဆိုတဲ့နေရာကို On ထားပြီးရပါပြီ။ File Size မှာ 573KB သာရှိပြီး Android OS Version 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ့်ဖုန်းကိုဘယ်သူတွေလာကလိလဲ သိချင်ရင် Hidden Eye Apk လေးကိုအောက်မှာဒေါင်းယူပြီးဆောင်ထားလိုက်ပါ။
ဖုန်းအဟောင်းပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့် အချက် (၅) ချက်
ပစ္စည်း ဘယ်လောက်ဟောင်းဟောင်း အဓိက မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် စမတ်ဖုန်းနဲ့ တက်ဘ်လက် ပတ်သက်ရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လိုချင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိဘက်က အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်တာက မိမိပစ္စည်းဟောင်းများကို eBay၊ OLX သို့မဟုတ် Facebook စတဲ့ အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွေမှာ ရောင်းချရန် ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိစမတ်ဖုန်းအဟောင်းများကို Flipkart, Amazon စတဲ့ အရောင်းအဝယ် လုပ်သူတွေထံလည်း ပြန်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘ်လက်ရောင်းတဲ့အခါ သတိထားရမယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။
၁။ တတ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ထိန်းသိမ်းထားပါ
စခရင်ခြစ်ရာပါတဲ့ ပစ္စည်းထက်စာရင် ခြစ်ရာလုံးဝမရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းက ဈေးပိုရပါတယ်။ ဒီတော့ ဖုန်းကာဗာ သို့မဟုတ် အိတ်လေး သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
၂။ မူရင်းဘူးခွံနဲ့ တွဲဖက်ပစ္စည်းတွေ သိမ်းထားပါ
တွဲဖက်ပါလာတဲ့ USB ပါဝါခေါင်းနဲ့ အားသွင်းကြိုးတွေအစား တခြားအပြင်ကဟာတွေ သုံးပါ။ မူရင်းဘူးခွံနဲ့ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ အထူးသဖြင့် မသုံးရသေးဘူးဆိုရင် လူတွေ ဈေးပိုပေးချင်ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်းက အသစ်နီးပါး ဖြစ်နေသေးပါက ထောင့်စုံကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ပေးပါက အကောင်းတိုင်းရှိသေးတဲ့ ပစ္စည်းဆိုရင် အလားအလားရှိတဲ့ ဝယ်သူတွေ သဘောကျကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းဖြင့် လုပ်ပေးခြင်းက ဝယ်သူတွေ စိတ်ဝင်စားမှုပိုရစေပြီး ဝယ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ တခြား ဖုန်းအရောင်းအဝယ်ဈေးကွက်တွေ လိုက်လေ့လာပါ
အထူးသဖြင့် ပစ္စည်းက သိပ်အခြေအနေမကောင်းတော့ပါက မရောင်းခင် လိုက်လေ့လာကြည့်ပါ။ eBay ထက် တခြားအရောင်းအဝယ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုကနေ ပိုက်ဆံပိုရမရဆိုတာ သင်မသိနိုင်ပါ။
၅။ နောက်ဆုံး မော်ဒယ်မထုတ်ခင် မိမိပစ္စည်းကို အမြန်ရောင်းထုတ်ပါ
မော်ဒယ်လ်သစ်ထွက်လာလို့ အရမ်း ဒိတ်အောက်မသွားခင် ရောင်းချပါက ပိုက်ဆံပိုရပါတယ်။ နောက်ထပ် မော်ဒယ်လ်သစ်ထွက်ရှိဖို့ ရက်စွဲကို နားစွင့်ကြည့်ပါ။
ref - http://www.trend.com.mm/
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က အချိန်ကို အလကားသက်သက်ကုန်စေတယ်လို့ ယူဆကြသူတွေရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်း ကောင်းတဲ့ဘက်က ဖြည့်တွေးကြည့်ရင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကကိုယ့်အတွက်အောက်မှာပြောပြထားတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ သူငယ်ချင်းများများရှိတာ ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်က အကြံဥာဏ်လိုအပ်တဲ့အခါမျိုး ဒါမှမဟုတ် သတင်းအချက်အလက် လိုအပ်နေတာမျိုးတို့ဆိုရင် status တင်လိုက်ရုံနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲမှာရှိကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းဝန်းကူညီပြီး အဖြေရှာပေးနိုင်ကြပါတယ်။
- ဂိမ်းကစားတာဟာ ဆိုးကျိုးတွေရှိသလို ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဂိမ်းတွေ ဆော့ကစားရင်း ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ အကဲဖြတ်ဝေဖန်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ တိုးမြင့်လာစေ နိုင်ပါတယ်။
- စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ ဥပမာ - ကိုယ်မသိရသေးတဲ့ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေးအစရှိတဲ့သတင် ၊ ဗဟုသုတတွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရှဲလ်လုပ်ကြသူများရှိလို့ သူတို့တွေကြောင့် အသိပညာဗဟုသုတတွေ ပိုရနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်ပျင်းသူတွေတောင်မှ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအားကြောင့် New feed မှာပေါ်တဲ့ စာတွေကို မလွတ်တမ်း လိုက်ဖတ်တတ်တဲ့ အကျင့် ရသွားကြပါတယ်။
- ငြင်းခုံပြောဆိုတာဟာ ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာနဲ့တူပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ငြင်းခုံပြောဆိုလို့ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလို ငြင်းခုံပြောဆိုဖို့ဆိုတာ အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်ဖို့၊ အကြောင်းပြချက်ကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ခ်တွေမှာ တိကျမှန်ကန်စွာနဲ့ငြင်းခုံပြောဆိုတာတွေကလည်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြှင့်နည်း တစ်မျိုးလို့လည်းဆိုလို့ ရပါတယ်။
- ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူတချို့က လက်တွေ့ဘ၀မှာ စာရေးပျင်းကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် ရောက်ရင်တော့ ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာတွေလိုပဲ ရေးသားနေကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ နောက်ပြီး စကားလုံး အသစ်အဆန်းတွေကိုလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊တွီတာအစရှိတဲ့ ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့ခ်မီဒီယာတွေမှာ ကွန့် ပြီးသုံးနှုန်းရေးသားကြတာတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Ref:GizmoCrazed , http://www.trend.com.mm/
♪ သင့်ရဲ့ Android Device နဲ့ iPhone မပျောက်ဆုံးခင် ကြိုတင် ကာကွယ်ထားရမယ့် နည်းလမ်း ကိုးခု ♫
ဒီနေ့ခေတ် စမတ်ဖုန်းတွေဟာ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်း မြင့်မားလာတာနဲ့ အမျှ ဖုန်းထဲမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖိုင်များ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရေးကြီး ဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းလာကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Android Device နဲ့ iPhone ပျောက်ဆုံးသွားရင် အဲဒီဖိုင်တွေအတွက် စိုးရိမ်စရာပါ။ ဒီလို စိတ်ပူစရာတွေ မဖြစ်ရလေအောင် သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်း မပျောက်ဆုံးခင်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရမယ့်နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Bonus : သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို Lock ပြုလုပ်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်း ပျောက်ဆုံးသွားရင် အခြားလူများ ဖုန်းထဲသို့ လွယ်ကူစွာ ၀င်လို့မရအောင် Lock ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Passcode, Password, Face Unlock, Pattern နဲ့ အခုဆိုရင် လက်ဗွေရာလုံခြုံရေးစနစ်တွေနဲ့ ကာကွယ်ထားနိုင်ပါပြီ။ iOS အတွက် Settings> Passcode or Touch ID & Passcode မှာ Lock ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Android အတွက်တော့ Settings> Security > Screen Lock မှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ Find my iPhone/iPad နဲ့ Android Device Manager တို့ကို အသုံးပြုပါ။
ဒီစွမ်းဆောင်ချက် နှစ်ခုက ပျောက်သွားတဲ့ သင့်ဖုန်းရဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံပေးနိုင်ပါတယ်။ အဝေးကနေ Lock ပြုလုပ်နိုင်သလို ဒေတာတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစွမ်းဆောင်ချက်တွေကို သင့်ဖုန်း မပျောက်ခင်မှာ Enable လုပ်ထားရမှာပါ။
Android : Google Setttings App ထဲသွားပြီး Security အောက်မှ “ Remotely locate …. “ နဲ့ “ Allow remote lock …. “ နှစ်ခုမှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
Android Phone ပျောက်သွားရင် Android Device Manager ၀က်ဆိုက်ကိုသွားပြီး ဖုန်းမှ Google Account နဲ့ Log In ၀င်ပါ။ ၀က်ဆိုက်ကနေ ဖုန်းရဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံနိုင်ပြီး Lock ပြုလုပ်တာ၊ ဒေတာများကို ဖျက်ဆီးတာတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
iOS : Settings> iCloud > Find My iPhone ( or iPad) ထဲသွားပြီး Find My iPhone Setting ကို Enable လုပ်ပါ။
ဖုန်းပျောက်သွားရင် ဒတ်စတော့ ၀က်ဘရောက်စာကနေ iCloud.com ကို သွားပြီး Apple Account နဲ့ Log In ၀င်ပါ။ Find My iPhone ကို နှိပ်ပြီး သင့်ဖုန်းရဲ့ တည်နေရာကို မြေပုံမှာ ရှာဖွေပါ။
၂။ သင့်ဖုန်း Sleep ဖြစ်သွားတာနဲ့ ချက်ချင်း Lock ပြုလုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ပါ။
သင့်ဖုန်းဟာ Sleep ဖြစ်သွားပြီးနောက် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာရင် အလိုအလျှောက် Lock ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်း ပျောက်သွားတာနဲ့ Lock ဖြစ်နေစေဖို့ အချိန်ကို နည်းသထက်နည်းအောင် သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
Android : Settings> Security > Automatically Lock ထဲသွားပြီး အများဆုံး ၃၀ မိနစ်ကနေ ချက်ချင်း Lock လုပ်ဖို့ သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
iOS : Settings> Passcode> Require Passcode ထဲသွားပြီး လေးနာရီကနေ ချက်ချင်း Lock လုပ်ဖို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Touch ID ပါရင်တော့ Immediately ကိုပဲ ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Control Center ကို Lock Screen မှာ ပိတ်ပါ။ ( iOS )
iOS7ကနေ စပြီး iOS Device တွေမှာ Control Center ပါရှိလာပါတယ်။ Control Center ကနေ WiFi, Cellular Settings, Media Controls, Alarms, Timers, Camera တို့ကို လျှင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Control Center ကို Lock Screen ကနေလည်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် သင့်ဖုန်း ပျောက်ဆုံးသွားရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ Settings နဲ့ အခြားအရာများကို အခြားလူများက အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Control Center ကို Lock Screen မှာ ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။
Settings> Control Center ထဲသွားပြီး “ Access on Lock Screen “ ကို Off လုပ်ပေးပါ။
၄။ အားကောင်းတဲ့ PIN , Password များပေးပါ။
သင့်ဖုန်းကို Lock လုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း ရှည်လျား ၊ ရှုပ်ထွေးပြီး သင် အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်တာမျိုးကို ပေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် “ My Father’s Name Is U Myint Naing and His Birthday Is 4th January 1950. “ ဆိုတဲ့ ၀ါကျကနေ ထိပ်ဆုံး စကားလုံးတွေကို ထုတ်နုတ်လိုက်ရင် “ mfniumnahbi4j1 “ ဆိုတဲ့ Password ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Password ဟာ ရှည်လျား ၊ ရှုပ်ထွေးပေမယ့် သင် အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။
Screen Lock ပြုလုပ်ရမယ့် နေရာကိုတော့ Bonus အပိုင်းမှာ ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
၅။ သင့်ဖုန်းမှ ဒေတာများကို Encrypt လုပ်ပါ။ ( Android )
Android 5.0 Lollipop ကို Pre-installed လုပ်ထားတဲ့ Android Phone, Tablet များမှာတော့ ဖုန်းမှ ဒေတာများကို Default အားဖြင့် Encrypt လုပ်ထားပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Passcode နဲ့ ဖွင့်မှသာ ဒေတာများကို ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lollipop ကို ကိုယ်တိုင် အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ ဖုန်းများအပါအ၀င် Android Phone , Tablet အဟောင်းများမှာတော့ ကိုယ်တိုင် Encrypt လုပ်ရမှာပါ။ Encrypt လုပ်ရင် အချိန် တစ်နာရီလောက်ကြာမြင့် တတ်ပြီး အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ ဖုန်းကို အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ နောက်ပြီး Encrypt လုပ်နေစဉ်မှာ ဖုန်းကို အားသွင်းထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Settings> Security > Encrypt Phone မှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သတိပြုရန် ။ ။ Encrypt လုပ်နေစဉ်မှာ Abort ပြုလုပ်ရင် သင့်ရဲ့ ဒေတာ အချို့ သို့မဟုတ် အားလုံး ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ Google က သတိပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ။
၆။ Activation Lock ကို ဖွင့်ပါ။ ( iOS )
ဖုန်းသူခိုးများက သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှ ဒေတာတွေကို စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး။ သူတို့ အလိုရှိတာက သင့်ဖုန်းမှ ဒေတာများကို ဖျက်ဆီးပြီး ဖုန်းကို ရောင်းစားဖို့ပါ။
iOS 8 မှာ Activation Lock ဆိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်ပါရှိလာပြီး ဖုန်း ခိုးခံရရင် သင့်ရဲ့ Passcode ကို သိမှသာ ဖုန်းကို Reactivate လုပ်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Activation Lock ဟာ Find My iPhone or iPad ကို Enable လုပ်ထားမှ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Settings> iCloud> Find My iPhone or iPad မှာ Enable လုပ်ပေးပါ။
၇။ သင့်ရဲ့ အမည်နဲ့ Contact Info ကို Lock Screen မှာ ရေးထားပါ။ ( Android )
သင့်ရဲ့ ဖုန်း၊ တက်ဘလက် ပျောက်သွားရင် Android Device Manager ကနေ Lock ပြုလုပ်လို့ရသလို ဖုန်းထံ Message ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကို ကောက်ရသူက ပြန်ပေးချင်ရင် သင့်ကို ဆက်သွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ ဖုန်းဟာ Airplane Mode ထဲမှာ ရှိနေရင် သို့မဟုတ် လိုင်းမမိတဲ့ နေရာမှာ ရောက်နေရင် အပေါ်က နည်းလမ်းက အဆင်မပြေပါဘူး။
အဲဒီအတွက် သင့်ရဲ့ Android Device မပျောက်ခင်မှာ Lock Screen မှာ သင့်ရဲ့ အမည်၊ အီးမေး၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အခြားဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ် စတဲ့ Contact Info ကို ရေးသားထားသင့်ပါတယ်။
Settings> Security> Owner Info မှာ ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ Lollipop မတိုင်ခင် ဖုန်းတွေမှာတော့ Show owner info on lock screen မှာလည်း အမှန်ခြစ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ Send Last Location ကို အသုံးပြုပါ။ ( iOS )
သင့်ရဲ့ iOS Device ဟာ ဘက်ထရီ ကုန်သွားရင် Find My iPhone ကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေလို့ မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ဘက်ထရီ မကုန်ခင်မှာ သင့် iDevice ရဲ့ နောက်ဆုံးတည်နေရာကို Apple ရဲ့ ဆာဗာများထံ ပေးပို့ထားရင် သင့်ဖုန်းရဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Settings> iCloud> Find My iPhone or iPad မှာ Send Last Location ကို On ပေးပါ။
၉။ Lock Screen မှာ Notification များကို ဖွက်ထားပါ။
Lock Screen မှာ Notification များကို ပြသပေးထားခြင်းဟာ အီးမေး၊ Text Messages ၊ Calendar Events နဲ့ အခြား သတင်းအချက်အလက်များကို Unlock လုပ်စရာမလိုဘဲ သိနိုင်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားလူများက Lock Screen မှ သတင်းအချက်အလက်များကို သိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်စေချင်ရင်တော့ Lock Screen မှာ Notification များ ပြသထားခြင်းကို ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Android : Settings> Sounds and Notifications ထဲသွားပြီး When device is locked ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒီကနေ Option သုံးခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Show all notification content ကတော့ Notification အားလုံးကို အပြည့်အစုံပြသမှာပါ။ Hide sensitive notification content ကတော့ ဥပမာအားဖြင့် အီးမေးဝင်လာရင် အသိပေးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် Subject Line ကို ဖွက်ထားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Don’t show notification ကတော့ Notification အားလုံးကို Lock Screen မှာ ပိတ်ပေးထားမှာပါ။
iOS : iOS မှာတော့ Lock Screen မှာ Notification တွေကို ပိတ်တာဟာ Android လောက် မလွယ်ကူပါဘူး။ Notification ပြသတဲ့ Apps တိုင်းကို စစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Settings> Notifications ထဲသွားပြီး App တစ်ခုချင်းစီထဲကို ၀င်ကြည့်ရမှာပါ။ App မှာ Show on Lock Screen ပါရင် Off လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာ ရခိုင်ဖောင့် ထည့်ဖို့အတွက် iFont Apk ကို ဒေနေရာကို သွားပြီးဒေါင်းပါ...
ဒေါင်းပြီးရင် ifront apkကိုအောက်ပုံအတိုင်း install လုပ်လိုက်ပါ
iFont apkကို Install လုပ်ပြီးရင် ..
ရခိုင်ဖောင့်ကို ဒေနေရာမှာဒေါင်းပါ (မရရင်) ဒေနေရာမှာ ဒေါင်းပါ (မရရင်) ဒေနေရာမှာ ဒေါင်းပါ
ပြီးရင်အောက်က ပုံတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်လိုက်ပါ
ဒေဘလော့ကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
IT နည်းပညာ (အရဟံ)